कानुन बाध्यकारी नबन्दा स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता कम - Laltin Media
कोरोनाले स्थगन भएका चीनतर्फका उडानहरु खुल्ने
काठमाडौँको मुहार फेर्ने कस्ता छन् योजना नवनिर्वाचित प्रमुख साहका?
मौद्रिक नीतिकाे त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक, यी हुन् नयाँ व्यवस्था
तीन दिन न्यून गतिमा बढेको नेप्सेमा समेत प्रोफिट बुकिंग, १६ अङ्कको गिरावट !
कोभिड-१९ र युरोपमा जारी द्वन्द्वबाट आर्थिक सङ्कटमा परेकाे श्रीलङ्काद्वारा अन्तरराष्ट्रिय सहयोगकाे अपिल
बालेनलाई बधाई दिँदै करिश्माले भनिन्-भविष्य देखेको तिर नै जनताले मत दिने हुन्
Home»राष्ट्रिय»कानुन बाध्यकारी नबन्दा स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता कम
कानुन बाध्यकारी नबन्दा स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता कम
By Sabina Maharjan April 26, 2022 Updated: April 26, 2022 No Comments3 Mins Read
स्थानीय तहको प्रमुख उपप्रमुखमध्ये एक महिला नै अनिवार्य हुने व्यवस्था नहुँदा आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता कम हुने देखिएको छ ।
खासगरी गत निर्वाचनमा झन्डै ९८ प्रतिशत महिला नगर उपप्रमुख वा गाउँपालिकाका उपाध्यक्षका रुपमा निर्वाचित भएकामा आगामी निर्वाचनमा त्यो घट्ने सङ्केत देखिएको हो । गठबन्धनका कारण अधिकांश स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवार फरक फरक दलका छन् । जसका कारण अधिकांश स्थानीय तहमा दुवै पदमा पुरुष नै रहेको पाइन्छ । एउटै दलले प्रमुख र उपप्रमुख पदमा फरक लिङ्गको हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि फरक दलको हुँदा त्यो बाध्यकारी छैन । संविधानले अनिवार्य गरेका वडा सदस्य पदबाहेक महिलालाई कम मात्रै अवसर पाएको देखिएको छ । वडाध्यक्षमा राष्ट्रिय दलहरुले थोरै सङ्ख्यामा मात्रै महिलालाई अवसर दिएको पाइएको छ ।
यस पटक सबै दलमा उम्मेदवार बन्न आकाङ्क्षी महिलाको सङ्ख्या भने ह्वात्तै बढेको छ । वडाध्यक्षदेखि नगर वा गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखमा धेरै महिला सिफारिस भएका थिए । गत निर्वाचनमा उपप्रमखमा निर्वाचितमध्ये अधिकांशले प्रमुखका रुपमा दाबी राखेका थिए । तीमध्ये थोरैले मात्रै चाहेअनुसारको अवसर पाए । कतिले पुनः उपप्रमख दोहो-याउन बाध्य भए भने कतिपय उम्मेदवार नै बनेनन् ।
प्रमुख दलका महिला नेत्रीले कानुन बाध्यकारी नबन्दा नै गत निर्वाचनभन्दा स्थानीय तहमा महिला सहभागिता घट्ने अवस्था आएको बताएका छन् । दल निकट महिला सङ्गठनले आ–आफ्नो दलमा नीति बनाएर महिला नेतृत्व बढाउन लबिङ गरे । तर नतिजा भने आउन सकेन । समग्रमा महिला उम्मेदवार कम देखिए पनि आफ्नो दलमा केही बढेको नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य निरुदेवी पालले बताइन् । आकाङ्क्षा ह्वात्तै बढेको भए पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी अवसर नपाएको उनको भनाइ छ । एमालेमा गत निर्वाचनभन्दा प्रमुखमा महिलाको उम्मेदवारी बढेको उनले बताइन् । प्रमुख पुरुष भएका स्थानमा स्वाभाविक रुपमा महिला उपप्रमुखको उम्मेदवार छ । उनले भनिन्, “कतिपय वडामा अध्यक्षका रुपमा पनि महिला उम्मेदवार रहेका छन् ।”
लामो समय जनप्रतिनिधिविहीन बनेका स्थानीय तहमा नयाँ संविधान लागू भएपछि विसं २०७३ मा निर्वाचन भएको थियो । त्यतिबेला निर्वाचित भएका महिलामा आत्मविश्वास बढेको र अहिले पहिलेभन्दा उपल्लो पदमा उठ्न इच्छा देखाएका छन् । उपप्रमुखमा निर्वाचितमध्ये अधिकांशले प्रमुख उठ्न चाहेको र तीमध्ये कतिपयले अवसर पनि पाएको उनले जानकारी दिइन् । महिलाको सहभागिता बढ्दै जाँदा आत्मविश्वास पनि बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, “न्यायिक समितिमा काम गरेको अनुभवका आधारमा पनि मैले राम्रो गरेको छु, त्यसैले अपग्रेड हुन्छु भन्नेछ ।”
पहिले गठबन्धन मिलेर निर्वाचनमा जाने भनेपछि प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा पुरुष नै उम्मेदवार हुने देखिएकाले त्यतिबेलादेखि नै त्यसो हुनु हुँदैन भनेर नेपाली कांग्रेसभित्र महिला नेत्रीले आवाज उठाएका थिए । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले आफूहरुले आवाज उठाउँदा उठाउँदै पनि प्रमुख र उपप्रमुखमा महिला उम्मेदवार कम भएको बताउनुभयो । निर्वाचन आयोगले दलहरुलाई महिला सहभागिता बढाउन अनुरोध गरे पनि त्यो हुन सकेन । उहाँले भन्नुभयो, “कानुनमा नै बाध्यकारी व्यवस्था नगरेसम्म मिलेर जाँदा महिला कम हुने देखिन्छ ।”
यस निर्वाचनमा महिला आकाङ्क्षीको सङ्ख्या उल्लेखनीय रहेको र आगामी दिनमा अझै बढ्ने देखिएको नेत्री भुसालको भनाइ छ । नेपाली कांग्रेसले अधिकांश कमिटीबाट माथिल्लो कमिटीमा सिफारिस गर्दा अधिकांश पालिकामा महिला आकाङ्क्षी रहेका थिए । उनले भनिन्, “नाम सिफारिस भएकामा थोरैले मात्रै अवसर पाउनुभएको छ ।”
काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्व अब युवाको हातमा